RW Itoobiya ayaa kula dardaarmay madaxda deegaanka Soomaalida iney u midoobaan dhibaatada gobolka - Halbeeg News
Bidix guddomiyaha Xisbiga Dimuqraadiga Soomaalida Itoobiya,(dhex) ra'isul wasaare Abiy Axmed,(midig) Mustafa Muxumad Cumar madaxweynahada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya
ADDIS(HALBEEG)-Ra’isul wasaaraha ayaa hadalkan jeediyay xilli uu shir si wadajir ah ula qaadanayay madaxweynaha dowlad deegaanka, Mustafa Muxumad Cumar iyo hoggaamiyaha Xisbiga Dimoqraadiga Soomaalida Itoobiya Axmed Shiddo.
Madaxda deegaanka ayuu rai’isul wasaaruhu kula taliyay in ay si wadahir ah uga miradhaliyaan geeddiga horumarineed ee uu deegaanku hiigsanayo taasoo ahayd arrinta kulanka xooggiisa looga hadlay.
Maalmihii dambe waxaa isa soo tarayay warar ku saabsan khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo hoggaamiyaha xisbiga kuwaasoo isku maandhaafsanaa kaalinta maamulka cusub ay ku yeelanayaan saraakiishii horay ula soo shaqeysay maamulkii madaxweynihii hore ee xilka laga tuuray, Cabdi Maxmuud Cumar.
Kulanka ayaa la filayaa in uu noqdo mid soo afmeera xurguf siyaasadeeddii maalmahan ka taagnayd magaalada Jigjiga.
Ra’isul wasaaraha ayaa hadalkan jeediyay xilli uu shir si wadajir ah ula qaadanayay madaxweynaha dowlad deegaanka, Mustafa Muxumad Cumar iyo hoggaamiyaha Xisbiga Dimoqraadiga Soomaalida Itoobiya Axmed Shiddo.
Mareykanka oo dhisaya Laami iyo Jid tareen oo isku xira Soomaaliya iyo Jabuuti